Mumwe weVatevedzeri vaVaTsvangirai Ovimbisa Kugadzirisa Kunetsana Kuri muBato reMDC-T
VaNelson Chamisa, vari pakati, vaina Professor Welshman Ncube naVaTendai Biti
Mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC-T, VaNelson Chamisa vanoti svondo rino bato ravo richagadzirisa nyaya iri kunetsa yekuti ndiyani anenge achifanobata matomu mutungamiri webato iri VaMorgan Tsvangirai vari kuchipatara muSouth Africa.
VaTsvangirai vane vatevedzeri vatatu vanoti VaChamisa, VaElias Mudzuri uye Muzvare Thokozane Khupe. Vatatu ava vave makara asionane panyaya yehutungamiri.
Vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro rwemubatananidzwa weMDC Alliance munhandare yeMamutse kuMasvingo, VaChamisa, avo vari kumiririra VaTsvangirai mumubatanidzwa uyu, vakaudza zviuru nezviuru zvevatsigiri vavo kuti vachaedza kugadzirisa makakatanwa ari mubato ravo svondo rino.
“Kureva kuti pane nyaya yanga ichitaurwa, musatambura kuti bato ringaita dambudziko. Hazvirevi kuti musoro ukatema mutumbi wese vafa, kunogona kusanzwisisana bhichana asi zivai kuti zvinowanikwa saka vhiki ino toda kupedza nyaya dzose dzewowowo kumusoro uko, tova nechinhu chimwe chete. Kana paita anoramba kunzwisisa tinodzidzisa nedzidziso yedu yeshanduko tibatane titarisane neZanu yava marengenya.”
Vamwe vatsigiri vebato iri vari kutyira kuti rinogona kutsemuka nepakati kana vatungamiri ava vakasaita mubatira pamwe.
Vachitaurawo pamusangano uyu, mutevedzeri wasachigaro weMDCT, VaMorgan Komichi vakatsiura vatungamiriri vari kunetsana kuti vataurirane vapedze nyaya yavo svondo risati rapera.
VaKomichi vanoti kurwisana uku kunorwadza vatsigiri vakawanda munyika avo vakamirira shanduko.
“I am instructing leadership of MDCT to come to sense to compromise to resolve the problem as matter of fact in a week’s time, we cannot continue sacrifice hope yevana veZimbabwe, vana ve Zimbabwe vanoda kuenderera mberi, vanoda kudya Mnangagwa ne Zanu yake, vanoda zvipatara havadi kunzwa kutukana kwenyu.”
Vachitaura pamusangano mumwewo, mutungamiriri we PDP vari nhengo yeMDC Alliance VaTendai Biti vakayambira vanhu kuti vabatane vavhotere mubatanidzwa wavo kunyangwe Zanu PF ikaita mhirizhonga.
“Gore rino tirikupedza hondo yatakatanga mugore ra1999, istruglle ine makuva saka 2018 we are finishing what we started, vane zvicheme se MDCT allaiance vana ngavawane mabasa, come Septemeber 2018 tinemge tine hurumende itsva yaMorgan Tsvangirai.”
Mutungamiriri MDC, Professor Welshman Ncube vakatsinhirawo VaBiti vachiti gore rino vanhu veZimbabwe vanofanira kubuda mukutambura kwavari kuita ne kuda kwehutongi hweZanu PF .
Vamwe vatungamiri vakanga vari pamusangano uyu vanosanganisira VaJacob Ngaribvume veTransform Zimbabwe, naVaAgrippa Mutambara veZimbabwe People First.
VaMudzuri vainge varipowo pamusangano uyu, asi havana kuwana mukana wekutaura, vamwe vachiti vashaya mukana nekuda kwemvura yakanaya yakawanda. Asi vamwe vanoti havana kupiwa mukana wekutaura nekuda kwemakakatanwa ehutungamiri ari pakati pavo naVaChamisa.
Kuramba Kutorwa Ropa KweVamwe Kwopa Kuti Kurwisa HIV/AIDS Kunetse
Varairidzi Voenderera Mberi neKufora Vachiratidzira Vakananga kuHarare Mushure Mekumbomiswa neMapurisa
ZAPU Yopemberera Kusvitsa Kwayo Makore Makumi Mashanu Nemanomwe
Inflation Yokwira Zvisati Zvamboonekwa Mumakore Gumi Apfuura
Mutungamiri weZIFa Mutsva Ovimbisa Kuvandudza Zvinhu muNyaya dzeNhabvu